Somaliland: Xisbiyada Mucaaradka Ah Ee Somaliland Oo Midowga Yurub U Ballan-qaaday In Aanay Doorashadu Mar Kale Dib U Dhicin Iyo Arrimaha Kale Ee Ay Kala Hadleen - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Xisbiyada Mucaaradka Ah Ee Somaliland Oo Midowga Yurub U Ballan-qaaday In...
Xisbiyada Mucaaradka ah ee Somaliland, ayaa Shalay kulan Albaabadu u xidhan yihiin la yeeshay Safiirka Midowga Yurub u qaabilsan Somaliland iyo Soomaaliya Veronique Lorenzo, taasi oo Safar ku timid Hargeysa.
Safiirka Midowga Yurub ee Somaliland iyo Soomaaliya, oo Somaliland u timid inay ka qayb-gasho Xafladda uu Komiishanka Doorashooyinka uu Khamiista Maanta ku daah-furayo bilowga Qaybinta kaadhadhka Cod-bixiyeyaasha Doorashooyinka Somaliland, ayaa Xisbiyada Mucaaradka ah ee WADDANI iyo UCID waxay kulanka ay la yeesheen kaga wada-hadleen Arrimo la xidhiidha Abaaraha ka jira Dalka iyo Doorashada Madaxtooyada Somaliland.
Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID Eng. Faysal Cali Waraabe oo kulankaasi ka dib, la hadlay Saxaafadda ayaa sheegay in Wakiilka Midowga Yurub ee ay la kulmeen Wer-wer ka qabto in mar saddexaad Doorashada Madaxtooyadu dib u dhacdo, laakiin ay ku qanciyeen in Doorashadu Xilligeeda ku qabsoomayso.
Faysal oo Arrimahaa ka hadlayaana wuxuu yidhi “Safiirka Midowga Yurub ee Somaliland iyo Soomaaliya, waxay ka soo qayb-galayaan Xafladda lagu Daah-furayo Qaybinta Kaadhadhka Cod-bixiyeyaasha Doorashooyinka, waxaanu wer-wer weyni ka hayaa in Doorashadu mar kale dib u dhacdo, Waayo? haddii beentaanu badato Runtaada dambe lama aamini karo, markaa waxaanu siinay Kalsooni, Waayo? ta dambe (Dib u dhigista), Annaga ayaa u ahayn horsed, markaa Doorashadani dib u dhici mayso.”
Guddoomiyaha Ku-meel-gaadhka ah ee Xisbiga WADDANI Xildhibaan Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde, oo isaguna Warbaahinta la hadlay, ayaa yidhi “Waxaanu la kulanay Safiirka Midowga Yurub, waxaanu kala hadalnay Abaarahan Daba-dheeraaday ee Xadaafiirta badan reebtay, sidii Abaartaa wax looga qaban lahaa ee Somaliland loo caawin lahaa. Markaa waxay noo sheegeen in Somaliland iyo Soomaaliya ay ugu talo-galeen 1 Bilyan iyo dheeraad ka saarta Xadaafiirta Sanadaha soconaysa ee Abaartu ka tagayso, markaa waxaanu ka rajaynaynaa Dawladda Somaliland inay dedaal u gasho inaynu qaybta ugu badan ka qaadanno.”
Xildhibaan Cabdiqaadir Jirde, waxa kale oo uu sheegay inay Wakiilka Midowga Yurub kala hadleen Arrimo doorashooyinka, “Waxa kale oo aanu kala hadalnay Arrimaha Doorashooyinka, waxaanuna u sheegnay haddii aanu nahay Xisbiga WADDANI inay naga go’an tahay Doorashadu in aanay dhaafin bisha November, 2017. Laakiin waxa muuqata in Xisbul-Xaakimku uu markii Doorashadu ahayd March uu lahaa Diyaar baanu nahay ee yaan Abaarta loo joojinin, maantana waxaad mooddaa inay soo if-baxayso Diyaar ma nihin November, ee dib ha loo dhigo (Doorashada).”ayuu yidhi.
Xisbiyada Mucaaradka ah ee Somaliland